भारत र चिनबीच युद्ध भए कसले जित्छ ? यस्तो छ अंक गणित « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
भारत र चिनबीच युद्ध भए कसले जित्छ ? यस्तो छ अंक गणित
भारत र चीनबीचको सम्बन्ध बेलाबेला तनावपुर्ण बन्छ । भुटानको डोक्लाम क्षेत्रमा चीनसंग भुटानका तर्फबाट भिड्न भारत पुगेको थियो । यही कारणले सन १९६२ को युद्ध यता पहिलो पटक भारत र चीनबीच सम्वन्ध निकै तल्लो स्तरमा ओर्लियो ।
यो क्षेत्रमा दुइ शक्तिशाली मुलुकका बीच युद्द हुने संशयले छिमेकमा रहेका मुलुकहरु चिन्तित बने । नेपाल यसको अपवाद हुने कुरै भएन ।
अहिले विवादमा चीन, भारतसंगै भुटान पनि मिसिएको छ । चीन भुटानसंग मात्र एउटा निचोडमा पुग्न चाहन्छ । तर भारत चीनलाई भुटानबाट प्रहार गर्ने पाएको मौका चुकाउने पक्षमा देखिदैन् ।
नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएयता विश्वका अन्य मुलुकसंग निकै ‘इन्गेज’ रहँदै भएको भारत चीनका विषयमा भने बेलाबेला आक्रमक देखिन्छ । अन्यथा सन १९६२ युद्धमा पराजय यता भारत सधै रक्षात्मक अवस्थामा देखिँदै आएको थियो ।
तर अब ‘सिनारियो’ बदलिएको जस्तो देखिन्छ । भारत र चीन ‘फुल फ्रन्टल वार’ नभए पनि एक अर्कालाई पाठ सिकाउने नाममा एउटा ‘क्याकुलेटेड मिनि वार’मा जान सक्ने सभावना छ। तर युद्ध कसैको हितमा छैन् र यसले उदयीमान भारतीय अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउन सक्छ भने केही समयता सुस्त बनेको चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी धक्का दिन सक्छ।
यो पनि पढ्नुस : चिनियाँ युद्धपोत युरोपतिर अघि बढ्दै..
तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको प्रशंग हो, युद्ध भइहाले कस्ले जित्छ। धेरैको चासोको विषय रहँदै आएको छ, संसारका सबै भन्दा बढि जनसंख्या भएका दुइ देश युद्धमा जाँदा कस्ले जित्छ ? चासो स्वभाविक नै भए पनि नतिजा विध्वंशकारी हुनेमा भने कसैलाई शंका छैन ।
कस्ले जित्छ युद्ध ?
युद्ध कसैले पनि जित्दैन्। युद्धमा दुबै पक्षलाई हार मात्र हात लाग्नेछ। युद्धले ल्याउने नरसंहार यति भयानक हुनेछ कि दुबै देशहरु उठ्नै नसक्ने गरि थच्चिनेछन् । यसको असर ती देशका छिमेका रहेका अन्यहरुमा पनि नराम्ररी पर्नेछ । युद्धले कसैलाई फाइदा गर्नेछैन् ।
यी तमाम विषयमा बाबजुत संसारका युद्ध हुने गरेका छन् । हजारौ निर्दोषहरु ज्यान गुमाउने गरेका छन् । संसारले दुई त्रासदीपुर्ण युद्ध बेहोरिसकेको छ । युद्धको त्रासदीबाट संसार जानकार छ तर पनि युद्धको तयारी पनि चलिरहेकै छ।कस्तो कति शक्ति ?
चिनियाँ वार्षिक सेन्य बजेट २१६ बिलियन अमेरिकी डलर छ। भारतको सैन्य बजेट चीन भन्दा धेरै कम ५० बिलियन अमेरिकी डलर छ
चीनसंग २३ लाख भन्दा सेना छन भने भारतसंग १३ लाख भन्दा बढिको फौज छ । यसै गरि चीनसंग ९१५० वटा ट्याङक छ भने भारतसंग ६४६४ ट्याङक रहेका छन् ।
लडाकु विमानको संख्यामा पनि चीनको दबदबा रहेको छ। चीनसंग ५ हजार वटा लडाकु विमान छन भने भारतसंग २ हजारको संख्यामा लडाकु विमान छन्।
पानीमा चीन भारतमाथि हावी देखिन्छ चीनसंग ७१५ वटा युद्धपोत छन् भने भारतसंग २९५ वटा युद्धपोत छन् ।
समुन्द्रमा सैन्य आधार मानिने एअरक्राफ्ट क्यारियरमा भने भारत चीनमाथि हावी छ। भारतसंग तीन वटा एअरक्राफ्ट छन भने चीनसंग मात्रै एउटा छ।
भारत यतिखेर संसारको सबै भन्दा बढि हतियार किन्ने देश बनेको छ। भारतले अमेरिका, रसिया र युरोपलेी देशबाट सबै भन्दा हतियार किन्ने गरेको छ। चीनलाई भने यस्तो सुविधा छैन, चीनले रसियासंग पनि हतियार किन्ने गरकेो छ ।
यस हिसावले भारतले संसारका सवै देशबाट हतियार किनेर जम्मा गरेको छ। यस विषयमा अर्को तर्क के पनि छ भने चीनले धेरै हतियार विकास आफै गरेको छ। जब सम्म कुनै देश हतियारमा स्वनिर्भर हुँदैन सुपरपावर बन्न सक्दैन ।
जस्तो अमेरिकाले कसैसंग हतियार किन्दैन्। यसल हिसावले भने चीनको पल्ला भारी देखिन्छ ।